Vaovao - Aza manontany ahy hoe inona ny sarimihetsika mampihena hafanana POF, lazao anao eto ambany?
Horonantsary mihena hafanana POF dia mihaona amin'ny fampiasana kaontenera fonosana amin'ny endriny samihafa. Ity sarimihetsika tsy misy poizina, tsy misy fofona, mahatohitra menaka ary manadio ara-tsakafo ity dia ahafahan'ny mpamorona mampiasa loko mahasarika maso hahatratrarana famolavolana marika 360 °. Omeo lalao feno ny fahaiza-mamorona sy ny sary an-tsaina, amin'izay ny zava-pisotro sy ny entam-barotra hafa dia miharihary kokoa amin'ny fampiasana marika, asongadino ny sary eo amin'ny talantalana, ary mamokatra vokadratsy tsy ampoizina. Ao amin'ny indostrian'ny sarimihetsika POF mihena ny hafanana, laharana voalohany amin'ny fizarana tsena anatiny ny orinasa ary faharoa amin'ny fizarana tsena manerantany.
Ny vokatra sarimihetsika hafanana POF dia azo zaraina ho sokajy telo: sarimihetsika mahazatra POF, sarimihetsika mifandray amin'ny POF ary sarimihetsika avo lenta amin'ny POF araky ny fampiasana sy ny fizotrany manokana. Amin'izao fotoana izao, ny fidiram-bolan'ny orinasa sy ny tombom-barotra lehibe amin'ireto karazana vokatra telo ireto dia mitaky mihoatra ny 95% etsy ambony no loharanom-bola sy tombom-barotra lehibe amin'ny orinasa. Ao amin'ny 2016Q1, noho ny fihenan'ny vidin'ny akora, nitombo ny tombom-barotra marobe vokarin'ny orinasa. Tamin'ny telovolana voalohany, nahazo tombony azo 20.265.600 yuan natolotry ny ray aman-dreny izany, fiakarana 268,15% isan-taona.
Mora ny mitaiza sy miasa. Ny hamafin'ny haavo, ny fikosehana ambany, azo ampiasaina amin'ny fonosana mandeha ho azy ny tsipika famokarana haingam-pandeha. Ny fizotran'ny fanodinana PVC dia hamokatra zavatra mora miovaova, izay mora miteraka fahasimbana mekanika, ary mora ny mifikitra amin'ny tsoroka famehezana, izay manelingelina ny asa ary sarotra ny mitazona azy. 5. Fiarovana aorian'ny famonosana POF, ny zorony efatra amin'ny tombo-kase dia malefaka, tsy hanapaka ny tanan'olombelona, ​​ary mahatohitra ny fikosehana. Aorian'ny fihenan'ny fonosana PE dia malefaka ny zorony efatra amin'ny tombo-kase ary tsy hanapaka ny tanan'olombelona. Aorian'ny famonosana PVC, ny zorony efatra amin'ny tombo-kase dia mafy sy maranitra, mora tapaka ary mandeha rà. 6. Ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fidiovana POF dia tsy misy poizina, tsy mamokatra fofona misy poizina mandritra ny fanodinana, ary mifanaraka amin'ny fenitra US FDA sy USDA. Ny PE dia tsy misy poizina, tsy mamokatra entona misy poizina mandritra ny fanodinana ary mahafeno ny fenitra US FDA sy USDA. Misy poizina ny PVC, ary hamokatra etona manitra sy misy poizina ny fanodinana, ary voarara tsikelikely.
Ny sarimihetsika OPS mihena (polystyrene miorina) hafanana mihena hafanana dia karazana fonosana hafanana vaovao miaraka amina ops hafanana mihena ny sarimihetsika izay mahafeno ny fepetra fiarovana amin'ny tontolo iainana. Ny horonan-tsarimihetsika hafanana OPS dia manana tanjaka avo, henjana avo lenta, endrika miorina tsara ary famirapiratana sy mangarahara tsara. Fanodinana mety, fandokoana mora, fampisehoana pirinty tsara, ary vahaolana avo lenta. Ho an'ireo mari-pamantarana izay manenjika tsy tapaka ny fanaovana pirinty tsara dia fanatsarana tanteraka ny fitaovana. Noho ny fihenan'ny haavon'ny sary sy ny tanjaky ny horonantsary OPS, dia afaka mifanakaiky amin'ny kaontenera misy endrika isan-karazany izy, noho izany tsy afaka manonta lamina mahafinaritra ihany,
Sarimihetsika Polyolefin Pof Shrink, Temperature famonosana polyolefin, Horonan-tsarimihetsika Vs Shrink Wrap, Mihena horonan-tsary horonan-tsary, Mitete Film Pvc, Famonosana Polyolefin Pof Shrink,